China YASKAWA ephethe irobhothi MOTOMAN-GP225 mveliso kunye nabenzi | Jiesheng
IYASKAWA ephethe irobhothi MOTOMAN-GP225
Inkqubo ye- IYASKAWA enkulu-ephathekayo ephatha iirobhothi MOTOMAN-GP225 inomthwalo omkhulu we-225Kg kunye noluhlu oluphezulu lokuhamba lwe-2702mm. Ukusetyenziswa kwe-IIts kubandakanya ukuthuthwa, iveni / ipakethe, ukugoba, ukuhlanganisa / ukuhambisa, njl.
Inkqubo ye- ukusingatha iirobhothi ezinkulu zeMOTOMAN-GP225 inomthwalo omkhulu we-225Kg kunye noluhlu oluphezulu lokuhamba lwe-2702mm. Ukusetyenziswa kwayo kubandakanya ukuthuthwa, iveni / ukupakishwa, ukuthambisa, ukuhlanganisa / ukuhambisa, njl.
IMOTOMAN-GP225 ifezekisa amandla okuphatha ngokugqwesa ngomgangatho ogqwesileyo wokuthwala, isantya, kunye netorque evumelekileyo ye-axis yesihlahla kwinqanaba elifanayo. Ukufezekisa isantya esiphezulu kwiklasi ye-225Kg kunye negalelo ekuphuculeni imveliso yabathengi. Ngokuphucula ukukhawulezisa kunye nolawulo lokuncipha, ixesha lokukhawulezisa kunye nokunciphisa lifinyelelelwe kumda ngaphandle kokuxhomekeka ekumeni. Ubunzima bokuthwala yi-225Kg, kwaye inokuthwala izinto ezinzima kunye ne-clamp ephindwe kabini.
Irobhothi yokuphatha enkulu IMOTOMAN-GP225 ilungele i- Ikhabhathi yolawulo yeYRC1000 kwaye isebenzisa intambo yokuhambisa umbane ukunciphisa ixesha elikhokelayo. Xa ufaka intambo yangaphakathi, idatha yendawo yoqobo inokugcinwa ngaphandle kokuqhagamshela ibhetri. Ukunciphisa inani leentambo kunye nezihlanganisi ukuphucula ukusebenza komsebenzi. Inqanaba lokhuselo lesihlahla sisiqhelo se-IP67, kwaye inesakhiwo esomeleleyo esingadibani nendalo.
6 225Kg Ubukhulu: 2702mm ± 0.05mm
1340Kg 5.0kVA 100 ° / umzuzwana 90 ° / umzuzwana
97 ° / umzuzwana 120 ° / umzuzwana 120 ° / umzuzwana 190 ° / umzuzwana
Ukuphatha iirobhothi zisetyenziswa ngokubanzi ekuphatheni okuzenzekelayo kwezixhobo zomatshini, kwimigca yokuvelisa ngokuzenzekelayo koomatshini bokuhlukumeza, kwimigca yokuzihlanganisa ngokuzenzekelayo, ukubamba kunye nokuphatha, kunye nezikhongozeli. Ixatyiswe ngamazwe amaninzi kwaye ityale imali eninzi kubasebenzi nakwizinto ezibonakalayo kuphando nakwisicelo, ngakumbi kubushushu obuphezulu, uxinzelelo oluphezulu, uthuli, ingxolo, kunye nezihlandlo ezinemitha enemitha kunye nongcoliseko, kwaye isetyenziswa ngokubanzi.
Egqithileyo YASKAWA UKUPHATHA IROBOT MOTOMAN-GP200R
Okulandelayo: IYASKAWA YOKUZOBA IROBOT MOTOMAN-EPX1250
Ukuphathwa kweRobothi yeAxis
Ukuphatha ingalo yeRobot
Ukuphathwa kweMizi-mveliso yeRobhothi
Ukuphathwa kweRobothi yeAxis, Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo, Ukuphatha ingalo yeRobot, Iinkqubo zokuphatha izixhobo zeRobotic, Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo, Ukuphathwa kweMizi-mveliso yeRobhothi,